The Rohingya News Bank : Phil Robertson
Is Myanmar guilty of genocide?
Rohingya refugees watch onamobile phonealive feed of Myanmar's State Counsellor Aung San Suu Kyi's appearance at the UN's International Court of Justice, inarefugee camp in Cox's Bazar on 11 December, 2019.
It was recently reported that Myanmar had conceded that it had committed “war crimes” against its Rohingya Muslim community. This is as far as Myanmar has ever gone in admitting responsibility for the atrocities committed against its Rohingya minority. Still, to some observers, this is not good enough.
Labels: 2020, ASEAN, BROUK, en, Genocide, HRW, Myanmar, News, Phil Robertson, Tun Khin
အာဆီယံဒေသတွင်း လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ပေါ်လာဖို့ တောင်းဆို
အရှေ့တောင်အာရှဒေသ (ASEAN) မှာ ပိုပြီးတော့ တက်တက်ကြွကြွလုပ်ဆောင်တဲ့ ဒေသတွင်း လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့တခု ဖွဲ့စည်းဖို့ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေက တောင်းဆိုကြပါတယ်။
လက်ရှိ အာဆီယံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် (AICHR) ဟာ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ လူ့အခွင့် အရေး ချိုး ဖောက် မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်တဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိတာကြောင့် ရယ်စရာဖြစ်နေတယ်လို့ လူ့အခွင့်အရေး စောင့် ကြည့် လ့လာရေးအဖွဲ့ (HRW) ရဲ့ အာရှဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး Phil Robertson က နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်၊ စနေနေ့က ဘန်ကောက်မှာ လုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်း ပြောသွားပါတယ်။
Labels: 2019, HRW, mm, Phil Robertson, ရိုဟင်ဂျာအရေး, သတင်း
Labels: 2019, Article, en, Opinion, Phil Robertson, Rohingya
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံရှိ မွတ်စလင် ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို တွေ့ရစဉ်
ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်မှာရှိတဲ့ RFA လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ ဌာနချုပ်ကို HRW လူအခွင့်အရေး စောင့်ကြည့် ရေးအဖွဲ့ရဲ့ အာရှရေးရာ လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး Phil Robertson အင်္ဂါနေ့က လာရောက်လည် ပတ် ခဲ့ပါတယ်။သူ့ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တဲ့ ဦးခင်မောင်စိုးက တင်ပြထားပါတယ်။
Labels: 2019, HRW, mm, Phil Robertson, RFA Burmese, ရခိုင်ပြည်နယ်, ရိုဟင်ဂျာ, သတင်း
ရှေ့နေဦးကိုနီလုပ်ကြံခံရမှု တရားရုံးဆုံးဖြတ်ချက် လုံ လောက်ခြင်းမရှိဘူးလို့ HRW ဝေဖန်
HRW အာရှတိုက်ဆိုင်ရာ ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး Phil Robertson။
ရှေ့နေ ဦးကိုနီ လုပ်ကြံခံရမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးရဲ့ စီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ လုံလောက်ခြင်း မရှိဘူးလို့ လူအခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ HRW ရဲ့ အာရှတိုက်ဆိုင်ရာ ဒု-ညွှန်ကြားရေးမှူး Phil Robertson က RFA ကို ပြောလိုက်ပါတယ်။
Labels: 2019, HRW, mm, Phil Robertson, သတင်း, ဦးကိုနီ
Myanmar Denies Entry Of UN Human Rights Expert
Myanmar has refusedaU.N. human rights expert entry as she visits Thailand and Bangladesh investigating abuses being committed in the country.
Myanmar has barred Yanghee Lee, the U.N. special rapporteur to Myanmar, from their country since December 2017. Lee has said she still seeks to engage with the Myanmar government and that she remains committed to her mandate of monitoring the human rights situation in the country.
Labels: 2019, DASSK, en, HRW, Kachin, Myanmar, Phil Robertson, UNHRC, Yanghee Lee
( 30.10.2018 ) Rights Activists: Rohingya in Bangladesh Vulnerable to Exploitation
FILE - Rohingya girls carry water pots at Kutupalong refugee camp, in Cox's Bazar, Bangladesh, Nov. 19, 2017.
Rohingya refugees, who escaped violence in Myanmar and settled in refugee camps in neighboring Bangladesh, are vulnerable to forced labor, human trafficking, and in some case to sexual exploitation, rights groups and activists warn.
Labels: 2018, Bangladesh, Nay San Lwin, News, Phil Robertson, Refugee, Rohingya, VOA English